သမ္မတရှီက CIIE ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ရုပ်သံမှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားမည် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် ၄ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပို့ကုန်ပြပွဲ (CIIE) နှင့် Hongqiao အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဖိုရမ်၌ ရုပ်သံဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးက ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Gao Feng က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov.3(Xinhua) — President Xi Jinping will deliverakeynote speech via video at the opening ceremony of the fourth China International Import Expo (CIIE) and the Hongqiao International Economic Forum,aMinistry of Commerce spokesperson said Wednesday.
The opening ceremony will be held in Shanghai on Nov. 4, said spokesperson Gao Feng. Enditem
Photo – Photo taken on Oct. 23, 2021 shows the south square of the National Exhibition and Convention Center (Shanghai),amain venue for the fourth China International Import Expo (CIIE), in east China’s Shanghai. (Xinhua/Fang Zhe)